Ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ihe n'aka China - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Isi ịsa ahụ > Isi ịsa aka
Isi ịsa aka Ndị nrụpụta
Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, a elu ọkachamara emeputa & Exporter na China na kemgbe na plastic ahịrị n'ihi na ihe karịrị 20 afọ na na sanitary ware ụlọ ọrụ ihe karịrị 10 afọ, Ọzọkwa. anyị ejirila usoro njikwa njikwa mma ISO 9002S na mbụ nke 1999. anyị na-arụpụta ngwaahịa ya niile na China. Ngwaahịa anyị bụ ahịrị ịdị ọcha nke ngwaahịa anyị gụnyere dị ka ndị a: Onye isi ịsa ahụ, isi ịsa ahụ aka, ihe ndọba ụgbọ okporo ígwè, ihe na-eji mmiri ịsa ahụ, mmiri ịsa ahụ, ihe ịsa ahụ, braket mgbidi ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ, Bidet ịsa ahụ, ngwa ịsa ahụ & ngwa ime ụlọ ịsa ahụ yana ịzụ ahịa na akụrụngwa ịdị ọcha ndị ọzọ. ngwaahịa na Mere in China Weebụsaịtị.
A na-ekewakarị isi ịsa ahụ n'otu ọrụ, ọrụ atọ na ọrụ ise. Ihe ndị bụ isi akụrụngwa bụ plastik ABS dị elu, nguzogide okpomọkụ dị elu, oghere zuru ụwa ọnụ, dabara maka ọtụtụ ezinụlọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na akwụkwọ ikike afọ abụọ. Ngwaahịa anyị agafeela nkwenye oge na nkwalite na-aga n'ihu, ndị ahịa ghọtara ya ma ree ndị na-ewu ewu na mba ofesi.
Onye isi ịsa ahụ nke nwere igwe ntụtụ rọba na-achịkwa kọmpụta ọhụrụ; Sistemụ nnwale ọkaibe na igwe nkwakọ ngwaahịa ọnya, anyị nwere ike ịnye gị ngwaahịa dị mma dịka achọrọ. Banyere nkwakọ ngwaahịa, anyị dị mma na nkwakọ ngwaahịa blister na igbe agba, n'ezie, anyị nwere ike ịnye ụfọdụ nkwakọ pụrụ iche ma ọ bụrụ na ndị ahịa nwere ọchịchọ. Dị ka onye nrụpụta, anyị nwere ebe a na-akpụzi anyị, ndị injinia nwere ahụmahụ dị njikere ime mgbanwe mgbanwe ọ bụla nke ị rịọrọ n'oge dị ngwa.
Bọtịnụ Isi ụlọ ịsa ahụ na-arụ ọrụ atọ
Bọtịnụ a na-arụ ọrụ ịsa ahụ isi ihe dị elu, plastic ABS ọhụrụ, electroplating akụkụ abụọ, otu isi mmiri mmiri, ụzọ mmiri mmiri atọ, ahụmahụ SPA ịsa ahụ na-atọ ụtọ.
Ịsa ahụ Omuma na-arụ ọrụ atọ
Nke a atọ arụ ọrụ kpochapụwo ịsa ahụ Classic aka ịsa isi, Ọhụrụ ABS plastic ihe, ezigbo mma chrome, mfe ịchịkwa multi-ọrụ mgba ọkụ, eluigwe na ala anọ-point interface.
Ịsa ahụ Electroplating na-arụ ọrụ ise
Nke a ise-arụ ọrụ electroplating ịsa ABS plastic ihe, elu-edu silica gel, mfe na-achịkwa multi-ọrụ mgba ọkụ, eluigwe na ala anọ-isi interface.
Otu ịsa ahụ aka ọrụ
Nke a Single ọrụ aka ịsa ezigbo price, Simple design, Blue silicone water outlet, obere size, mfe ijide, chromed okokụre.
Isi mmiri ịsa ahụ nke kichin
Igwe mmiri a na-esi nri kichin Isi Classic na-ewu ewu kichin aka ịsa ahụ. ABS plastic, chromed, 2-ọrụ, ezigbo mma, mere na China
Kọmpat Electroplating Otu Ọrụ ịsa ahụ
Nke a kọmpat electroplating otu ọrụ ịsa ahụ ezigbo ọnụ ahịa, Mfe imewe, mfe ijide, mmiri ozuzo spa mmetụta, China factory
Zụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị a na-akpọ Huanyu Sanitary Ware bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebuga Isi ịsa aka na china. Ogo anyị dị elu Isi ịsa aka na-ewu ewu na ndị chọrọ inweta ngwa ahịa dị ọnụ ala. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa iji nye ọrụ n'ogbe. Ị nwere ike ijide n'aka ịzụta ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ anyị.